Ukunikezwa kwemisebenzi: UMsizi (weS) onguMgcinimafa - I-Afriland First Bank yaseCameroon - T TL RELAY
Ukunikezwa kwemisebenzi: Umsizi (we) uMgcinimafa - i-Afriland First Bank yaseCameroon
By Tchinde On UJul 15, 2020
I-Afriland First Bank I-Cameroon ifuna abaSizi abangu-02 bakwa Treasurer. Njengoba zibekwe ngaphansi kokubuswa yiNhloko yoMnyango Wezezimali, umgomo wazo oyinhloko kuzoba ukuthengisa imikhiqizo yomgcinimafa ukuze kuthuthukiswe inzuzo nephothifoliyo yebhange.
Iphrofayili yommeli ofanele:
Ibhange laseCameroonia lifisa ukuqasha kulesi sikhundla umuntu ozongenela ukhetho olunamazinga aphansi we-BAC + 5 Kwezezimali / Kwezokuphatha / Kwezentengiselwano / Kwezomnotho. Ngaphezu kwalokho, iminyaka engu-02 yesipiliyoni iyadingeka emsebenzini ofanayo noma ngomsebenzi womphathi webhizinisi. Ngaphezu kwalokho, okhethwayo kufanele abe nolwazi lokuphathwa kwengozi nemikhiqizo yomgcinimafa.
I-AFRILAND YOKUQALA YOKU-BANK CAMEROON IQAPHELA IMIHLAZO YAMAHHALA
Ibekwe ecaleni lokukhwabanisa e-DRC, iqembu lase-Afriland le…
I-Afreximbank, ibhange lase-Afrika lokungenisa ngaphakathi ezweni, liqhamuka…
Umnqamulajuqu wesicelo: Julayi 17, 2020
uthintane Umsebenzi we-Afriland First Bank.
ESenegal: Isiqiqi saseLa Somone esisongelwe yiprojekthi yamahhotela
UNchout Ajara Njoya: "Ngingathanda ukukhetha ukuhlehliswa kwe-CAN"
ngifuna umphathi wekreyidi lesinkwa kuphela ngeSonto
Sesha Abasizi Bezibalo
Ukuqashwa kwabapheki abanamakhono amaningi kanye nabapheki be-barbecue zokudlela